रेडियो अडियोमा काम गर्दा फाईदै फाईदा– दीपाश्री निरौला - Gufgaf : Nepal ko entertainment web site : Nepali cinema & Gossip : Nepali comedy : Video & jokes : celebrity interview : Nepali art ,music , manoranjan & more
२१ मंसिर २०७४, बिहीबार ११:०० 12
यसै मेसोमा निर्देशक तथा रेडियो अडियोकी प्रस्तोता दीपाश्री निरौलासँग केही कुराकानी गरेका छौँ ।
रेडियो अडियो ११ वर्षमा प्रवेश गरेको उपलक्ष्यमा के भन्न चाहनुन्छ ?
आज वास्तवमा नै खुशीको दिन र क्षण हो । यो उत्सब हो । यसलाई माहा उत्सब बनाउने हजुरहरु नै हो । श्रोताहरुलाई धेरै धन्यवाद । दश वर्ष पूरा भईसक्यौँ है एघार वर्ष उकालो चड्दै छौँ । तर, यसको सम्पूर्ण देन श्रोताहरुको नै हो । रेडियो अडियोमा धनियालाई धेरै माया गर्नुभएको छ । रेडियो अडियोलाई तपाईको माया र अविरल निरन्तरताले गर्दा आज हजुरहरुले मलाई धनियाको नामले चिरपरिचित गराईदिनुभएको छ । म यति धेरै खुशी छु कि रेडियो अडियो दश वर्ष पुगेर एघार वर्ष होईन कि यो रेडियोमा मेरो कार्यक्रम बज्छ भनेर । रेडियो अडियोको कार्यक्रम सबै कमेडीले भरिपूर्ण हुन्छ किनभने हाम्रो उदेश्य नै सबै दर्शकको मन खुशी बनाउने हो । दुख त छदैँ छ नि । तर, खुशी हुनु सबै भन्दा ठूलो कुरा हो । त्यही कारणले हाम्रो रेडियोको उदेश्य भनेको हाम्रो दर्शकलाई खुशी बनाउने हो । हरपल यस मै छ मज्जा । यो मज्जा हजुरहरु सँग साट्न पाउँदा यति धेरै खुशी भएको छु । दश वर्ष, एघार वर्ष, बाह्र वर्ष उकालो चड्दैँ जान्छ हजुरहरुको माया अझै बढ्दै जान्छ । त्यही भएर त भन्छु रेडियो अडियो १०६.३ एफ.एम. यस मै छ मज्जा ।
रेडियो अडियोमा आउँदा कसैले पनि यो अफिस हो भन्दा पनि यो मेरो परिवार हो भनेर आउँछन जस्तो लाग्छ । यो घरलाई मैले बचाउँनुपर्छ भन्ने सोचेर आउँछन जस्तो लाग्छ । मैले व्यवहारमा पनि देखेको छु । यही वातावरणले पनि होला दशौँ वर्ष बाट एघारौँ वर्ष लागेको छ । हामीलाई धेरै श्रोता, विज्ञापन एजेन्सी र स्टाफहरुले पनि साथीले पनि साथ दिनुभएको छ । यहाँ काम गर्न एक जना भाईलाई मैले जापान र युरोपमा भेटेको छु । यहाँ काम गर्दा फाईदा नै छ बेफाईदा भन्दा ।
तपाई रेडियो अडियो सँग पहिलो वर्ष देखि नै निरन्तर रुपमा सँगै हुनुहुन्छ है?
यो कुरामा निकै खुशी छु कि म डे वान देखि रेडियो अडियो सँग आबद्ध छु र मलाई सबैले सुनिरहनुहुन्छ । म सिनेमामा गए, स्टेजमा गए, टेलिफिल्म लगायत जहाँ सुकै गए तर मैले रेडियो अडियो छोडिन । मेरो मनको क्यारेक्टर हो धनिया । दिपेन्द्र जीले मलाई अफर गरिसक्दा पनि आहा मेरो धनिया फेरि बिउँझिने भयो भन्ने भएको थियो । पहिले रेडियो नेपालको कार्यक्रम थियो राम विलाश र धनिया । त्यसैको धनिया अहिले रेडियो अडियोमा छ ।
धनिया भएर कसरी रेडियोमा आबद्ध हुनुभएको थियो सानो कहानी भन्नु न ?
वास्तवमा अनामनगरको एउटा जमघटमा हामी दिपक शर्मा, दिपेन्द्र खनियाँ, दिपेन्द्र भन्दा अझै टाढाको महसुस भईरहेको छ । ऊ मेरो आफ्नै भाई जस्तो हो । यति धेरै उकालो चढी रहेको छ उसलाई अझै धेरै शुभ कामना । त्यो बेलामा मलाई दिपेन्द्र भाईले दिदी यो धनिया भन्ने क्यारेक्टरलाई फेरि राखौँ न मेरो एफ.एममा भन्नुभयो । उहाँले हामीले एफ.एम खोल्ने भएको छौँ भन्दा म भाईले एफ.एम खोल्दा आफ्नो ठाँउमा खुशी थिएँ होला तर मेरो धनिया क्यारेक्टर बिउँझिन्छ भनेर म अझै बढी खुशी भए । त्यो पछि धनियाको दुनिया कस्तो कन्सेप्टमा बनाउने भन्ने भयो । पछि कार्यक्रमको नाम ‘धनिया कि दुनिया’ राखौँ भन्ने भयो । किनभने दुनियामा त सबै थोक हुन्छ । अनि मैले के भने भनी म आफू पनि सिनेमाको भएको कारणले म सिनेमाको क्यारेक्टरलाई बोलाएर कार्यक्रम चलाउँछु नि त । यस्तो खाल्को गरौँ यो झन रमाईलो हुन्छ भने । त्यसपछि ती विषय वस्तुलाई सा्रोताले पनि मन पराइदिनु भयो
मैले शुरुवात बाट नै कार्यक्रम चलाउन पाउँदा निकै खुशी छु । रेडियो अडियो जहाँ पनि सुनिन्छ । श्रोताले हामीलाई निकै माया दिनुभएको छ ।
टेलिभिजन, स्टेज कार्यक्रम र सिनेमा व्यस्त हुदाँ रेडियोको एउटा कार्यक्रमलाई कसरी समय मिलाईरहनु भएको छ ?
जहाँ ईच्छा त्यहाँ उपाय भन्छन । मलाई फेरि यहाँको स्टाफ भाई बहिनीहरुले निकै मद्दत गर्नुहुन्छ । म जहाँ छु उनीहरुलाई माईक्रोफोन लिएर आउन भन्दा आईपुग्छन । दशै तिहारमा म प्रोग्राम स्टक गरेर जाने गर्छु । यसमा मलाई सेलिब्रिटी कलाकारहरुले पनि सहयोग गर्नुहुन्छ । मलाई रेडियोको सबै साथीहरुले सहयोग गरेको हुनाले पनि मैले यो कार्यक्रम टिकाउन पाएको छु । सबै जनाले माया दिएको कारणले नै म टिकीरहेको छु ।
रेडियो अडियोमा यति धेरै समय बिताउँदा यहाँ भएको रमाईला कुरा तपाईको जीवनमा पनि दर्ज भएको छ होला नि ?
रेडियो अडियो मैले विर्सन नसक्ने एउटा संस्था हो । रेडियो अडियोले धेरै वटा कमेडीलाई बचाएको छ । कमेडिन कलाकारलाई सम्झिएको छ । त्यस हिसाबले पनि हामीले सदैब रेडियो अडियोलाई सम्झिनुपर्छ । अर्काे कुरा रेडियो अडियोमा आउने बितिक्कै कार्यक्रम चलाउन मात्र आएको हो झै महसुस नै हुदैन । यहाँ आफ्नो परिवारको वातावरण झै महसुस हुन्छ । त्यो कारण पनि म रेडियो अडियोलाई एकदमै मिस गर्छु । अहिले त झन फिल्मको क्रियाकलापलाई बढी ध्यान दिएको कारणले पनि फिल्मी रुपी आखाँले हेर्नुपर्दा पनि एकदमै राम्रो भएको छ रेडियो अडियो । उतार चढाव त जिन्दगीमा भई नै हाल्छ । रेडियो अडियो स्थापना हुदाँ पनि धेरै उतार चढाव थियो होला । मान्छेले के सोच्नुपर्छ भने आफूले काम गर्दा उतार बढाव त भईहाल्छ । तर पनि नबिराई नडराई अघि बढ्नुपर्छ ।
पर्दामा पनि तपाईले आफूमा धेरै परिवर्तन देख्नुभएको छ । रेडियो अडियोको पहिला शुरुको कार्यक्रम सुन्नुभएको छ ? त्यो बेला कार्यक्रम चलाउने पारा र अहिलेमा के फरक छ ?
पहिला शुरुको कार्यक्रम नै मैले जितु भाईसँग गरेको छु । कार्यक्रम चलाउने पारामा धेरै फरक छ । पहिला आफूमा पनि कन्फिडेन्स नआएको जस्तो लाग्छ । किनभने राम विलास र धनिया एउटा प्रेमी प्रेमिकाको कार्यक्रम थियो । तर, यहाँ म एउटा एक्लो प्रस्तोताको रुपमा छु । पहिलो पटक जितु हुदाँ सजिलो भएको थियो किनभने ऊ आफैमा एउटा प्रतिभा भएको मान्छे हो । उसले पनि राम्रो उत्तर दिईरहेको थियो । मेरो ‘धनिया की दुनिया’मा नबोल्ने गेष्ट आयो भने चाहि निकै अप्ठ्यारो हुन्छ । नाम नभनौँ कहिले काही त्यस्तो भएको पनि छ (हाँसो ) । भूमिका नबनाई बोल्ने मान्छे भयो भने एक घण्टाको कार्यक्रममा दश मिनेट बोल्न पनि गाह्रो हुन्छ । तर, मलाई मेरो गेष्टले के भन्नुहुन्छ भने बाफ रे धनिया आधी घण्टा सम्म नन स्टप बोलेको बोल्यै । कहाँबाट शक्ति आउँछ भन्नुहुन्छ । ‘धनिया की धुनिया’ कार्यक्रम गर्न आउँदा मलाई भित्र देखि नै खुशी लाग्छ । अहिले म आफूमा पनि पहिलेको तुलनामा निखार आएको हो कि जस्तो लाग्छ ।